ငါက သကြားလုံးလေးတွေ အလကားပေးတိုင်း မယူတတ်တာ အချိုမကြိုက်လို့ ပါ…ငါက လျှာဖျားက အရသာချိုချိုထက် ရင်ထဲက နှလုံးသားချိုချိုတွေကို တရှိုက်မက်မက် တောင့်တတတ်သူ…သကာလူးထားတဲ့ စကားလုံးတွေ နောက်က မရိုးသားခြင်းထက် အရိုးခံရင်ထဲက စကားတချို့ ကို ခုံမင်တတ်သူ…
ငါ့ရင်ထဲက နှလုံးသားကို အကာအကွယ်မရှိ တိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်အောင် ငါက နုံချာသူ…
အဲဒီနုံချာမှုအတွက်… ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရပေါင်းလဲ များပေါ့…လမ်းမှားမှာ မူးမိုက်နေသူ တယောက်ကို သူ့ အကြိုက်လိုက်ပြီး အတူမမူးမိတာနဲ့ ပဲ စေတနာတွေက အရာမထင်ခဲ့တဲ့ ဥပမာတွေ ခဏခဏတွေ့ လဲ ငါက ခေါင်းမာနေတုန်းပဲ…
ချစ်သူရေ… ဒီတခုတော့ ခွင့်လွတ်ပါကွယ်… ငါဟာ ချစ်သူ့ ကို ညွှတ်နူးစေအောင် အပြောအဆို မတတ်တဲ့ ခပ်အအ မိန်းမတယောက်ပါ… ငါဟာ ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ဖွင့်ဖွင့်ချတတ်တဲ့ စကားလုံးချိုချိုတွေ ဆင်းရဲသူတယောက်ပါ… ငါ့နှလုံးသားတခုလုံး မင်းကို ပုံပေးပြီးမှတော့ ကျန်တာတွေ ဘာအရေးကြီးလို့ လဲလို့အတွေးခေါင်တဲ့ မိန်းမတယောက်ပါ… မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာမနမ်းတတ်သူမို့မင်းအတွက် ငါ့အနမ်းမှန်သမျှက စစ်မှန်နေတယ်ဆိုတာတော့ ငါကျိန်ဆိုရဲပါတယ်…
ခင်မိသူတိုင်းကို ဆွေလိုမျိုးလို အောင့်မေ့မိတဲ့ ငါက ဒဏ်ရာတခုခု ရလို့ငိုမိတိုင်း အမေက စည်းမခြားတတ်သူတဲ့… ငါကလဲငါ… ပေးမိတာတွေ များများသွားတော့ င့ါဆီက မျှော်လင့်တာတွေ များများလာ… အခြေအနေတခုကြောင့် ငါက မပေးနိုင်တော့တဲ့အခါ အရင်က ပေးခဲ့တာတွေ အလကားဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်.. အမေပြောတဲ့ စည်းပေါ့… ဒါလဲ အမှတ်မရှိစွာ ထပ်ထပ်မှားနေတတ်တော့ င့ါနှလုံးသားမှာ ဒဏ်ရာတွေ ဗလပွ…
တဆိတ် မိတ်ဆွေရယ်… ငါက လုပ်ယူထားတဲ့ အရာတွေကို မနှစ်သက်တတ်ဖူးကွယ်… ချစ်ရင်ချစ်တယ် မုန်းရင်မုန်းတယ် ပေါ့…ဖန်တီးယူထားတဲ့အရာတွေကို မနှစ်သက်တတ်ဖူး… မင်းနှလုံးသားထဲက ပြိုကျလာတာဖြစ်ပစေ မလှမပလဲ ငါက တန်ဖိုးထားနေမှာ… ဖြစ်နိုင်ရင် အတွင်းနဲ့ အပြင် ထပ်တူကျတဲ့ စစ်မှန်မှုတွေကိုပဲ င့ါကို ပေးနော်…သိပ်များ လောဘကြီးသွားသလား… ငါ့ကို ရင်ထဲကမုန်းမုန်းနဲ့ ဟန်ဆောင်ပြုံးပြနေတာနဲ့ စာရင် ဆဲလိုက်တာမှ ခံသာဦးမယ်လေ…
သူငယ်ချင်းရေ…ရှေ့ မှာ ချီးမွမ်းစကားတွေဆိုပြီး နောက်ကွယ်မှာ သူများအားနည်းချက်ကို ထောက်ပြ ရယ်မောတတ်သူတွေထဲ ငါမပါတာကိုတော့ နင်နားလည်ပေးနော်… နင်တခုခု လွဲချော်နေတယ်ထင်ရင် ငါက မကွေ့ မ၀ိုက်ပဲ ထောက်ပြမိမှာပဲ… တခါတခါ ဇလိုက်ဇရောဆိုတာ ငါနဲ့ သူစိမ်းပြင်ပြင် ဖြစ်နေရင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်… မတရားတဲ့ အရာရှိကို ရာထူးတိုးဖို့ တခုထဲနဲ့ခေါင်းငုံ့ မခံတတ်တဲ့ ငါက လိမ္မာပါးနပ်သူ မဟုတ်တာ အမှန်ပဲ… အဲဒီလို မိုးခါးရေတွေ မကြိုက်တတ်တဲ့ မိုက်မိုက်မဲမဲ င့ါလိုလူကို နင် ယနေ့ ထက်ထိ ခင်နေတာ ကျေးဇူးပါဟာ…
လောကကြီးက ချိုမြတဲ့အရသာဆိုပြီး င့ါကို လက်ဆောင်ပေးတယ်… ငါလေ မိုက်လိုက်ပုံများ… ခေါင်းတွင်တွင်ခါပြီး ငြင်းနေတော့တာ…
Posted by တန်ခူး at 10:44 AM
မတန်ခူးရေ.. ဒီစာလေးဖတ်ပြီး သဘောကျတယ်။ အတွင်းက စိတ်တမျိုး အပြင်က တစ်မျိုး၊ အဲဒီလို လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာ ကျနော်နဲ့ ကီးမကိုက်။ အခုဒီမှာတော့ ဟန်ဆောင်သူတွေကြားနေရတာ တကယ်မွန်းကျပ်တယ်။ ကိုယ့်အတွက်တော့ စိတ်ထဲက ဖြစ်သမျှဟာ မျက်နှာမှာပေါ်နေတယ်။ မကြိုက်ရင်လည်းအရှင်း ကြိုက်ရင်လည်း ဘွင်းဘွင်းသမား မို့ လူချစ်လူခင် မများလှဘူး။ ဟန်မဆောင်တတ်တော့လည်း အခက်သားလားပဲ မရေ.. :)
လံကဓော…လောကဓံကတော့ ဘယ်သူမှ ပြေးမလွတ်ဘူး။ ဒီတော့ သိပ်စိတ်ညစ်နေလို့ တွက်ခြေမကိုက်ဘူး။ စိတ်ညစ်ရင် ချစ်ကောင်းသီချင်းလေး ဟစ်လိုက်မယ်။
ဒုက္ခဟာ ပျားရည်လိုချိုတယ်….. (ဘီယာလို ခါးရင်လည်း ကြိုက်ပါတယ်…အဟဲ)
အစ်မရေ့ ဒီပို့စ်လေး သဘောကျတယ် ဖတ်ပြီး ကိုယ်ဖြစ်လေးတွေနဲ့ လည်းတိုက်ဆိုင်တာ ဟန်ဆောင်ရတာကလည်း ပင်ပန်းတယ် သီးခံရပါများတော့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်ဘာမှန်းကိုမသိတော့ဘူး ။ အမှန်တကယ်တော့ နားလည်မှုတွေ ရှိကြရင် လောကကြီးကတော်တော်ငြိမ်းချမ်းမှာ အစ်မ အဆင်ပြေပါစေ ညစ်နေတာတွေခေါင်းထဲဝင်လာရင် သားသားနဲ့ကစားလိုက် ပျော်လာလိမ့်မယ် :)
အမသည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။ :P
လူတွေရဲ့ အပေါ်ယံအချိုတွေတော့ မကြိုက်တတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အစားအသောက် အချိုတော့ ကြိုက်ပ ညီမရေ။
ညီမရေ စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဘ၀မှာ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာလုပ်ပြီး စေတနာမှန်ရင် ပြီးတာပါပဲ။ အဲဒါတော့ အမ သုံးတဲ့ နည်းပဲ။
အမ - မချိုသင်း
အမ တန်ခူးရေ ပို့စ်လေးကို သေချာဖတ်မိတယ်
ဟန်မဆောင်ချင်သလို ဟန်ဆောင်တတ်သူတွေလဲ ကြောက်မိတယ်နော်..
မလွယ်ပါဘူးအမရယ် “မုသားမပါ လင်္ကာမချော“ဆိုရင်တော့ လင်္ကာတွေကြမ်းနေအုံးမယ်နဲ့တူပါတယ်
အဲလိုနဲ့ သကြားမစားမိလို့ ခဏခဏပြဿနာတွေ့ရပေမဲ့ အမှန်တရားအတွက် အမုန်းခံဆဲပဲ..။
ပြောမရလို့ ကြည့်နေရပေမဲ့ ... အခွင့်သာတာနဲ့ ပြန်နှက်နေဆဲ..။
ဟန်ဆောင်တာတွေ သိပ်မုန်းတယ်။ သကာလောင်းတဲ့ ပဋိသဓာရ စကားတွေလဲ သိပ်မုန်းတယ်။
မခင်ရင် ပြုံးပြဖို့တောင် ဝန်လေးတယ်.
ဒါပေမဲ့ ..ခုတော့ တခါတလေ..ပြုံးပြနေရတယ် နုတ်ကလဲ ဂျပန်တွေလို အလွယ်တကူထွက်သွားတယ်
sumimasen ဆိုပီး..မပြောလို့မှ မရပဲလေ..။ဟင်းးး
(အန်တီစုဘာသာပြန်တဲ့ “အကယ်၍” ကဗျာက သက်ဆိုင်ရာနေရာလေးကို ထုတ်နှုတ်ပြီး နှစ်ခါပြန် ကွန်မင့်လိုက်ပါတယ်။)
လူတိုင်းကို တန်းဖိုးထား လေးစားရပေမဲ့
စွဲလန်းမှု သံယောဇဉ်တွေ ထားမနေဘူးဆိုရင်…။
တိုတောင်းလှတဲ့ မပစ်ပယ်နိုင်တဲ့ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ
အရာရာ ဘာမဆို မင်းစွမ်းနိုင်ပြီပေါ့ …။
မင်းဟာလည်း ယောက်ျားကောင်းတယောက်ပေါ့ …။
စကားချိုချိုတွေနောက်ကွယ်က မာယာ ခါးခါးတွေကို ကြောက်တယ်... အမရေ ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပြီးပြီနော် လာအကြောင်းကြားတာပါ
တန်ခူးရေ comment မရေးဖြစ်တာရော၊ post မတင်ဖြစ်တာရောက တို့ရေးသမျှတွေ စာပေစိစစ်ရေးကို တင်နေရတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အထွက်နောက်ကျတာပေါ့ကွာ။
နုရေ… တူလိုက်တာနော်… ဘွင်းဘွင်းသမားတွေရဲ့ စေတနာကို နားလည်သွားတဲ့ တနေ့ ကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ရမှာပေါ့လေ….
ကိုပေါရေ… အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
မောင်မျိုးရေ… အမှန်ပဲ… နားလည်မှုတွေရှိကြရင် စစ်ပွဲတွေတောင် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးနော်… သားနဲ့ ကစားရတာ တကယ် အားလုံးမေ့….
မ ရေ… ကျွန်မက တကယ်လဲ အချိုအရသာကို မကြိုက်လို့သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ်နဲ့ တဲ့ ရောဂါ ခဏခဏရတယ်… မူးတာ ချာချာလည်လို့ … မ နဲ့ ကျွန်မ ရောမွှေပစ်လိုက်ရင် အတော်ပဲနေမှာ… မ ရဲ့ ဘ၀လေး ငြိမ်းချမ်းတာ မ စာတွေက တဆင့် သိပြီး အားကျမိတယ်….
မဇနိရေ… အမလင်္ကာတွေ ကြမ်းကြမ်းနေလို့အတော်သတိထားနေရတယ်…
မြတ်နိုးရေ… အတူတူပဲနော်… ဒါကြောင့်လဲ မြန်မြန် ခင်မိသွားတာ ဖြစ်မယ်….
ကိုပေါရေ… အဲဒီကဗျာလေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ကျွန်မအလုပ်စားပွဲဘေးမှာ ကပ်ထားခဲ့ဖူးတယ်…
လှိုင်ရေ… မာယာခါးခါးတွေက တကယ့်ကြောက်စရာပါ…
ဓာတ်ပုံလေးတွေ အားပေးပြီးပြီ… သိပ်လှတဲ့ နဂါးမလေးကို တွေ့ လိုက်ရတယ်…
မ ရေ… စာပေစီစစ်ရေးနဲ့ လား… အဲလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ လို့ ဝိုင်းပြောပေးရမလား… မရဲ့ ခံစားချက်တွေ filterလုပ်ပြီးမှ ရောက်လာတော့မှာပေါ့…
အတွေးကောင်းသလို အရေးလဲကောင်းတဲ့ တန်ခူး..။
လျှာဖျားက အရသာ ချိုချိုကို နဲနဲမှ မကြိုက်ပေမယ့် နှလုံးသားချိုချို နဲ့ရိုးသားမှု ချိုချိုကိုတော့ တန်ဖိုးထား တလေးတစား မြတ်နိုးတတ်ပါတယ်..။
မအားလို့ဘယ်မှ ကောင်းကောင်း မလည်ဖြစ်ဖူး တန်ခူးရေ...။ တန်ခူးဆီတော့ နေ့ တိုင်းရောက်ပါတယ်။ Comment မရေးဖြစ်ပေမယ့် စာတော့မှန်မှန် လာဖတ်ဖြစ်တယ်...။
သက်ဝေရေ… ကော်မန့် လေးကို ခုမှတွေ့ လို့sorryနော်… နှလုံးသားချိုချိုနဲ့ ရိုးသားမှုချိုချိုတွေ ကြိုက်တာချင်းတူနေပြီ… မအားတဲ့ ကြားထဲက လာလည်တာ ကျေးဇူးနော်…